BGF – democracy for burma
#DKBA #ရှင်းချက်ထုတ် #STATEMENT #INTERNET #MEDIA #KOKANG
On February 24, 2015 February 24, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, DKBA, KOKANG, MYANMAR, WARLeaveacomment
အင်တာနက်သတင်းမီဒီယာများပေါ်တွင် ထွက်ပေါ်နေသော DKBA မှ အစိုးရတပ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး MNDAA ခေါ် ကိုးကန့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အား တိုက်ခိုက်မည်ဆိုသည်မှာ လုံးဝမဟုတ်မမှန်ကြောင်းနှင့် MNDAA ခေါ် ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့သည် မိမိတို့နဲ့ ဘဝတူ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ၄င်းတို့၏ အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအတွက် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေသည်ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မဟာမိတ်တော်လှန်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် မိဘပြည်သူများ မိမိတို့အပေါ် နားလည်မှု မလွဲကြရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ခေါ် MNDAA သည် မိမိတို့နည်းတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်စု ဖြစ်သည်ကို ပြည်သူအများ သိရှိပါရန် ကျေညာအပ်ပါသည်။ cr. u naing win
#MYANMAR #BURMA #ကရင်ပြည်နယ်မြ၀တီတွင် ဇတ်တူသားစားမှုဖြစ်ပွား
On September 23, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
စက်တင်ဘာ – ၂၂ – ၂၀၁၄
မြ၀တီမြို့ တွင် ဇတ်တူသားစားခြင်းခံရသူ၏ ရုတ်အလောင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နယ်ခြားသောင်ရင်းမြစ်အတွင်း ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သေဆုံးသူမှာ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) အထူးစစ်ကြောင်းမှ ဗိုလ်ကြီးလမင်း၏ စစ်သည်စောတာနိုဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိချိန်တွင် လက်ထပ်ခတ်လျက်သား လည်ပင်းအလှီးခံထားရကာ ဦးခေါင်းတွင်လည်း သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံထားရသည်ဟုသိရသည်။
ဗိုလ်ကြီးလမင်းက လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ ရက်နေ့က တပ်သားစောတာနိုကို (ကရင်ပြည်နယ်) နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း အမှတ်(၁၀၂၂)က ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးနေပြီး ယနေ့တွင်အလောင်းပြန်လည်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာပြောဆိုကာ ယခုကိစ္စကိုတရားဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုပြောသည်။
စောတာနိုပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ် (၁၀၂၂)သို့မေးမြန်းရာ စတင်ဖမ်းဆီးသည့်နေ့မှာပင် ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း ဗိုလ်လမင်းကဆိုသည်။
ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ြ၍ နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ် (၁၀၂၂)က တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုံးများပိတ်ထားကြသည်။
အဆိုပါတပ်သား သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်းကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြ၀တီဆက်ဆံရေးရုံးကလည်း မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့သည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအတွင်း ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒေသတွင်းရှိကရင်အမျိုးသားများက ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအရေး ရင်လေးမိသည်ဟု မြ၀တီမှကရင်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကမိန့်ကြားသည်။
၎င်းက”ဘုန်းကြီးတို့က ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပြည်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ကာလမှာ ဒီလိုမျိုးဇတ်တူးသားစားတဲ့အလုပ်မျိုးက လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး အခြေအနေတွေဒီထက်ထပ်ပြီး မဆိုးရလေအောင် ချက်ခြင်းဖြေရှင်းကြဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်”ဟု မိန့်ဆိုသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲခံနေရသူများဘက်က တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘားအံမြို့ ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ဒီလိုဘဲဆက်ပြီးဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဟင်္သာကိုးသောင်းပျက်တဲ့ကိန်းဘဲဆိုက်ဘို့ရှိတယ် အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ သိကြပါလို့ဘဲပြောချင်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
KNLA က ကရင်တပ်မှူးဟောင်းတဦးက” ကရင်အချင်းချင်းတွေဘဲ သဘောထားကြီးရမယ်လေ အရင်ကအတူတူနေလာခဲ့ကြတာဘဲ ကျောင်းတော်ကရန်စတွေကို ဒီလိုကာလမှာ မေ့ထားသင့်ပါပြီး”ဟု သဘောထားပေး ပြောဆိုသည်။
ပုံစာ – ယနေ့နံနက်က ပြန်တွေ့ရှိသည့် တပ်သားစောတာနို ။ CR. ကရင်အမျိုးသား- မီဒီယာ
တရားခံငါးယောက် က အဲ့မှာ ကရင်တွေမဟုတ်ဘူး BGF ထဲကဗမာတွေ တစ်ယောက်က အရက်မသောက်ရလို့ သေသွားပြီး CR.Saw Htut Htut
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ အောက်ရေပူကျေးရွာအုပ်စု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ ဖိုးထောင် (ခ) ဆွာဟစ်သည် နော်အဲ့ဒိုထူးအား မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်း 05.Nov.2013
On November 8, 2013 November 8, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
၂၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီခွဲခန့် အချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ အောက်ရေပူကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေအင်ဒုံရွာအနီးရှိ အင်တောကုန်းတွင် နေထိုင်သော အဘ ဦးဖားဘလက်ထူး ၏ သမီးဖြစ်သူ ကရင်လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ရှိ နော်အဲ့ဒို့ထူးသည်
မုန့်ဝယ်ရန် ကျောက်တောင်ရွာ ကရင်စုသို သွားခဲ့ပါသည်။
လမ်းခုလတ်တွင် ကော့တာဟိုး ရွာသို့ စက်ဘီးဖြင့် ဗူးသီးသွားရောက်ရောင်းချပြီး ကျောက်တောင်သို့ ပြန်လာသူ ဖိုးထောင် (ခ) ဆွာဟစ်၊ (အသက် ၂၄ နှစ်၊ (ဘ) ဦးအဘိန်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ ကျောက်တောင်ရွာတွင်နေထိုင်သူ) သည် နော်အဲ့ဒိုထူးအား လည်ပင်းညစ်၊ ဗိုက်နှင့် ပါးကို ရိုက်နှက်ပြီး ပွေ့ချီကာ လေးပေခန့် နက်သော ရေတွင်းဟောင်းထဲသို့
ပစ်ချပြီး သူပါ ခုန်ဆင်းကာ နော်အဲဒို့ထူး၏ စကတ်ကို လှန်၊ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ကာ မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းနေစဉ် နော်အဲဒို့ထူးမှ ” ဝေးမို့မို့” (မေမေရေ) ဟု အော်ဟစ်သော အသံကို အခင်းဖြစ်ပွားနေရာ ရေတွင်းပျက်နှင့် တစ်ဖာလုံခန့်ဝေးသော ကျောက်တောင်ရွာ၊ ကရင်စုတွင်နေထိုင်သူ BGF (နယ်ခြားစောင့်တပ်)အဖွဲ့ဝင် ရွှေကရင်၏ မိန်းမဖြစ်သူမှ ရေချိုးနေရင်း ကြားရ၍ ၄င်း၏ ယောက်ျားဖြစ်သူ ရွှေကရင်အား ယောက်ျားရေ ဟိုမှာ လူတစ်ယောက်ကလေးကို ပွေ့ခေါ်သွားတယ်၊ ကလေးကလဲ အော်နေတယ်
မြန်မြန်သွားကြည့်ပါဟု ပြောဆို၍ ရွှေကရင်မှ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ အပြေးသွားရောက်ခဲ့စဉ် ဖိုးထောင် (ခ) ဆွာရက်မှာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။
ကျောက်တောင်ရွာ၊ ရေပူရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာများမှ ရွာသူ ရွာသားများက တရားခံမမိပါက လက်တုန့်ပြန်မည်ဟု ဖိအားပေးခဲ့ခြင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရမှ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်စီမံခြင်းကြောင့်သာ တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။
တရားခံဖြစ်သူ ဖိုးထောင် (ခ) ဆွာဟစ်၊ အသက် ၂၄ နှစ်၊ (ဘ) ဦးအဘိန်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကျောက်တောင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူအား (ပ) ၁၂/ ၂၀၁၃၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၂၃၊ ၃၅၄၊ ၃၇၆၊ ၅၁၁ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူးထားကြောင့် သိရှိရပါသည်။
by – ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့တော်
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ငါးမြို့နယ် စုပေါင်းကျင်းပနိုင်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောသိန်းမြင့်
On October 16, 2013 October 16, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KIC ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ငါးမြို့နယ် စုပေါင်းကျင်းပနိုင်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောသိန်းမြင့်
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ်၊ ရွှေကုက္ကိုမြိုင်ရွာခမ်းမတွင် ယမန်နေ့ နံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅နာရီကျော်အထိ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကရင်လက်နက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဖားအံ၊ လှိုင်း ဘွဲ၊ ကော့ကရိတ်၊ ကြားအင်းဆိပ်ကြီး၊ မြ၀တီမြို့နယ်များမှ ရပ်မိရပ်ဖများက ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် စုပေါင်းကျင်းပနိုင်ရေးကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF (၁၀၁၉)တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးမောင်ဝင်း၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကေအဲန်ယူ စည်းရုံးရေးဌာနတာဝန်ခံ ပဒိုစောလှထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး ရွှေကုက္ကိုကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မန်းစိုးရွှေ၊ တွဲဘက်အ တွင်းရေးမှူး BGF အမှတ်(၃)တိုက်နယ်မှ ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ရွှေကုက္ကိုရပ်မိရပ်ဖိ မန်းကြည်အေးနှင့် စာရင်းစစ်အဖြစ် ဖားအံခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောအောင်မော်အေးတို့ အပါအ၀င် ကော်မတီဝင်ပေါင်း ၁၉ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းကော်မတီကို ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရန် ကေအဲန်ယူ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီ၊ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီမှ ဗိုလ်ချုပ်ရင်နု၊ BGF ကွပ်ကဲရေးဥက္ကဋ္ဌ စောထွန်းလှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့မှ ခွဲကဘောင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး မန်းဗလရှင်တို့ကိုလည်း နာယကအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးမောင်ဝင်းက “ဒီနှစ် ကရင့်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို မြို့နယ် ငါးမြို့နယ် စုပေါင်းကျင်းပဖို့ရယ်။ နောက်ပြီး ဒီ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဟာ အနစ်သာရရှိရှိ ကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့ ကရင်အမျိုးသားရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကမ္ဘာကို ပြသဖို့အတွက် ဒီကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ Continue reading “ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ငါးမြို့နယ် စုပေါင်းကျင်းပနိုင်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောသိန်းမြင့်” →
On August 19, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
DKBA နှင့် KNU တို့ လက်တွဲနှုတ်ဆက်
နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းရန် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂျော်နီအဖွဲ့ နှင့်အစိုးရ နယ်ခြား စောင့်တပ် (BGF)မှ ဗိုလ်ချုပ် စောထွန်းလှိုင်တို့သည်ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်ဟု BGFမှ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူး နိုင်မောင်ဇော်က ဆို ပါသည်။
“ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ဒီလို ပစ်ခတ်မှုက မဖြစ်သင့်တော့သလို နောင်လည်းမဖြစ်ဖို့ပါ။ အခုအချိန်က အချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားလုံး ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ ဖြစ်စဉ်က အလွန်တရာမှ ရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်စေပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က လွန်ရင် ကျနော်တို့ အရေးယူမှာပါ။အခုကိစ္စမှာ KNU ဘက်က သူတို့ အစည်းအဝေး ပြန်ခေါ်ပြီး ပြန်ညှိ နှိုင်းပေးမယ်လို့” ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် BGF တပ်ဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း (၃) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို မြ၀တီ ခရိုင်ရွေကုက္ကိုလ် ကျေးရွာတွင် ကျင်းပ ပြီးစီးပါက ထပ်မံ ဆွေးနွေး မည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။
KNU တပ်ဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့၌ ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန် ခရိုင်ရှိ BGF ၀ဲကြီး စခန်းကို ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် BGF မှ ဒုတပ်ကြပ် စောစိန်ပွင့်နှင့်တပ်သား စောကြည်သန်းတို့ နှစ်ဦး ဒါဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါသည်။
အစိုးရ တပ်များသည် BGF နာမည်ဖြင့် KNU တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေတွင် နေရာအနှံ့ တပ်စွဲပြီး KNU တပ်များအား အကြပ်ကိုင်ရာမှ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု KNU မြ၀တီ ဆက်ဆံရေးရုံးမှ ပဒိုပန်းသီးက ဆိုပါသည်။ Continue reading “ပစ်ခတ်မှုကိစ္စ KNU နှင့် BGF တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး” →
BGF claims to be “in brotherhood” with DKBA, KNU
On August 9, 2013 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Border Guard Force (BGF) secretary of information Major Naing Maung Zaw releasedastatement on Wednesday, August7claiming the government-directed BGF considers itself the third member inabrotherhood between the Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) and Karen National Union (KNU).
“Under the conditions of ceasefire, we are all brothers. Because of this we were able to form an armed forces unity committee this past May,” said Major Maung Zaw. The DKBA and KNU were the 3rd and 6th armed groups to sign ceasefire agreements with Naypyidaw, respectively.
The three parties are currently cooperating onanumber of projects in Karen state, includingalandmine clearing initiative in Kyone Thaw and Mi Zaing areas of Myaing Gyi Ngu.
Furthermore, the groups have agreed to work together towards eradicating drug trafficking, construct infrastructure in underdeveloped Karen villages, and promote nationwide peace.
To materialize these goals, the three bodies will hold quarterly meetings focused on structuring tripartite efforts to improve village communities. According to Major Maung Zaw, politics will not be on the meetings’ agendas.
On August 20, the BGF will celebrate its 3rd year anniversary in Shwe Koh Ko camp of Myawaddy township.
Kayin(Karen) Unity and Peace Council to act as mediator in negotiation among Kayin’s (Karen,s)armed groups
On May 23, 2013 May 23, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
22.MAY 2013 EMG
The Kayin Unity and Peace Council will act asamediator the peace negotiation various Kayin’s armed groups with the hope of achieving national reconciliation, Man Aung Pyi Soe of Phalon Sawaw Democratic Party said.
The agreement came from the round table of discussion of all Kayin political forces held at Hope International Office Kayin Unity and Peace Council in Yangon on May 18 and May 19.
In the past, skirmishes among Kayin armed groups broke out. We all sought the solution so as to secure reconciliation among the armed groups. We agree that Kayin Unity and Peace Council would act as mediator in the negotiation for reconciliation, Man Aung Pyi Soe said.
Kayin affairs meeting was held on April 29 and April 30 in Hpa-an in Kayin State, organized by Kayin Unity and Peace Council. The council consists of 37 members from members of parliament, political parties, armed groups and groups for arms for peace.
The skirmishes among the Border Guard Force (BGF) formed with former Democratic Buddhist Army (DKBA) members and the DKBA allied forces on April 27 and April 28.
After increased tension over the skirmishes in Kayin State, officials of Myanmar Peace Center held discussions with Kayin armed groups.
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့၏ ရာဇသံကို DKBA ပယ်ချ
On May 3, 2013 May 4, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Friday, 03 May 2013 06:00
မေလ (၄) ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံး ထားပြီး ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ မြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူ ဒေသရှိ မယ်ပနှင့် မဲကဆော်ရှိ ဒီမို ကရေစီ ကရင် အကျိုးပြု တပ်မတော် DKBA စခန်းများကို ပြောင်းရွှေ့ ပေးရန် အစိုးရ စစ်ဗျူဟာမှ ရာဇသံ ပေးခဲ့သည်ဟု ပြောခွင့် ရသူ DKBA ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်းအောင်က ဆိုပါသည်။
“ ဒီအမိန့်က အရှေ့တောင်တိုင်း တိုင်းမှူးကနေ တဆင့် တပ်မ (၂၂) မှူးကို ညွှန်ကြား ခဲ့တယ်။ အဲဒီကတဆင့် ကျနော်တို့ ဆုံစည်းမြိုင် အနားမှာ ရှိတဲ့ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းထွန်းဝင်းက တဆင့် ကျနော်တို့ကို အကြောင်းကြား ခဲ့တယ်။ ရာဇသံ ရက်ကလည်း မနေ့က မေလ (၂) ရက်နေ့ကမှ အသိပေး တာပါ။ ထွက်ပေးရမှာက မေလ (၄) ရက်နေ့ ဆိုတော့ ဒါက မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စလေ။ ဒါကြောင့် လက်မခံနိုင်ဘူး။” ဟု ဆိုပါသည်။
အစိုးရ ဗျူဟာမှူးများ ကမူ ဆုတ်ခွာရန် အမိန့်ပေးခဲ့သော နေရာတွင် ဟပ်ကြီး ရေကာတာ တည်ဆောက်ရန် ရှိနေသဖြင့် ရေကာတာ ဆည်သောက် ဧရိယာ၌ ပါဝင်သော နေရာ အားလုံးကို ပြောင်းခိုင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းပြ ထားခဲ့ပါသည်။ DKBA ကမူ ပြောင်းရွှေ့ရမည့် နေရာ အစား မရှိသေးခြင်းနှင့် တပ်ဖွဲ့ ဖူလုံရေး ပြသနာများကြောင့် ရာဇသံကို လက်မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။
ယင်း ရာဇသံ ပြသနာသည် ဗိုလ်ကျော်ဘိ ဦးဆောင်သော DKBA အဖွဲ့နှင့် အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တပ်မမှူး ဗိုလ်ချုပ် တင်မောင်ဝင်း တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲနေသည့် နယ်ခြားစောင့် တပ် (BGF) အဖွဲ့တို့၏ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားသော တိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော ပြသနာဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Continue reading “အစိုးရ တပ်ဖွဲ့၏ ရာဇသံကို DKBA ပယ်ချ” →